Transcoding - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
NAB NEWS: Cortex v5.2 အတွက် MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြေညာချက်များ ProRes RAW ပံ့ပိုးမှု
HOLLYWOOD- MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, စက်မှုလုပ်ငန်း-ချီးကျူး Post-ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကို Cortex ၏ developer တစ်ဦးအစွမ်းထက် feature အသစ်, ProRes RAW များအတွက်ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် update ကို Cortex မှ MTI ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အဆင့်မြှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် NAB 2019 မှာပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသစ် Cortex 5.2 ဗားရှင်းကင်မရာ sensor ကိုရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်နှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, အားလုံး frame ကိုအရွယ်အစားမှာ ProRes RAW ထောက်ခံပါတယ် ...
V-Nova PERSEUS ပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
• SaaS မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်လာမည့်မျိုးဆက်ကိုဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့အခမဲ့အစမ်းရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်•ပိုမိုမြန်ဆန် encoding ကနှင့်အခြားသောမိုဃ်းတိမ်ပလက်ဖောင်းထက်သိသိသာသာနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေး PERSEUS Plus အား၏•ပွိုထိရောက်မှု UHD မှ SD ကအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်နှင့် VOD encoding ကအသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းထောက်ခံပါသည် နှင့်ကုန်ကျစရိတ် optimization ရရှိနိုင် NAB 2019, Las Vegas မှာ, 8 - 11 ဧပြီ ...
လက်ဝှေ့သမား ITV လန်ဒန်မှာ Telestream Vantage တပ်ဆင်ပြီး
Harpenden ဗြိတိန်, 26 စက်တင်ဘာလ 2018 - Boxer စနစ်များ, ဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်နဲ့တီဗီစျေးကွက်များအတွက်ဦးဆောင်ဗြိတိန်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, ယနေ့ ITV လန်ဒန်မှာ Telesteam ရဲ့အစွမ်းထက်, အရွယ်မှာ, ဆော့ဖ်ဝဲ-enabled Vantage မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းများ၏အောင်မြင်သောတပ်ဆင်ခနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ဝှေ့သမားစနစ်များ Telestream ရဲ့ဗြိတိန်ရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီး, သတ်မှတ် install နှင့်စနစ်ကို configure ITV နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Jayson Chase, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ ...
V-Nova Socionext မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် Processor ကိုများအတွက် PERSEUS Plus အား၏ရရှိမှုကိုကြေညာ
•အဆိုပါပူးတွဲဖြေရှင်းချက်• Watt နှုန်းမယှဉ်နိုင်တဲ့အရည်အသွေးကိုပေး PERSEUS Plus အား၏ချုံ့စွမ်းဆောင်မှုနှင့် Socionext devices များရဲ့သိပ်သည်းဆနှင့်အာဏာထိရောက်မှုအပေါ်တည်ဆောက်• V-Nova PERSEUS Plus အား SDK ကိုလုံခြုံရေးနှင့်ထုတ်လွှင့် application များအတွက် Socionext ရဲ့ Multi-core processor ကို SC2A11 အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် PERSEUS Plus အားတည်ဆဲ H.264 / HEVC ဖြေရှင်းချက်တဝက်ဘစ်နှုန်းမှာကူးစက်ခံရဖို့ဗီဒီယိုကိုဖွင ...
Cloud ကို Transcoding ဘို့ Deluxe ကို select Hybrik
အသစ်ဖွင့်လှစ် Deluxe တစ်ခုမှာပလက်ဖောင်း Deluxe Entertainment ကန်ဆောင်မှုများအဖွဲ့ (Deluxe) အတွက်ထူးချွန် throughput ထောက်ပံ့ယနေ့ကသစ်ကို Deluxe တစ်ခုမှာပလက်ဖောင်း၎င်း၏မိုဃ်းတိမ်ကို transcoding ပံ့ပိုးပေးအဖြစ် Hybrik ကိုရွေးချယ်ထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ Deluxe တစ်ခုမှာ Deluxe ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့် Third-party, အကောင်းဆုံး-of ဖောက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြု modular ဗိသုကာနှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Hybrik ၏ cloud-based မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, Deluxe ဖြစ်တယ် ...
Dalet NAB 2018 မှာသတင်းကဏ္ဍများအတွက်လူမှုမီဒီယာတိုးမြှင်
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - ဧပြီလ 4, 2018 - ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး Dalet ကြောင့် NAB 2018 (ပြခန်း SL8010) မှာပြပါလိမ့်မယ်, ယနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအခန်းကဏ္ဍကိုင်တွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဂျာနယ်လစ်များအတွက်အသစ်သောစွမ်းရည်များထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါသတင်းကဏ္ဍတွင်။ "ရိုက်တာသတင်းဌာနကအင်စတီကျုဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအစီရင်ခံစာ  get (US မှာ) နမူနာသူတို့၏အမျိုးအ 2017% ထက်ကြောင်း 51 ပိုမိုဖော်ပြထား ...
ဘီဘီစီဝေလသစ်ထုတ်လွှင့်ရေးဗဟိုဌာန၏အဓိကကို AT DALET ထီ
ဘီဘီစီဝေလနယ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အသစ်သောမီဒီယာစက်ရုံပဲရစ်ကိုဖြတ်ပြီး Workflows orchestrate မှ Dalet က Galaxy ရွေးချယ်ပြင်သစ် - ဒီဇင်ဘာလ 5, 2017 - Dalet, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူ, ဘီဘီစီဝေလနယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Dalet က Galaxy မီဒီယာကိုရွေးချယ်ထားပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုက၎င်း၏အသစ်အမှာအားလုံး workflow နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန် (ပေးခဲ့သည်) နှင့် orchestral ပလက်ဖောင်း ...
Hybrik နှင့် Signiant တိမ်တိုက်မီဒီယာ Workflows အပေါ်မိတ်ဖက်ကြေညာ
Mountain View, CA - Hybrik, Inc ကိုယနေ့ကမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအာကာသအတွင်းသုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူ Signiant, Inc နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖြစ်ထဲသို့ဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, Signiant အသိဉာဏ်ဖိုင်လှုပ်ရှားမှုဆော့ဖ်ဝဲစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Hybrik transcoding နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်အကြီးစားမိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုနည်းပညာပလက်ဖောင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုမှထူးချွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်တတ်၏ ...
ယင်း၏မိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းအတွက် Dolby Vision ၏ Encoding ပံ့ပိုးမှုပေါင်းစပ်ဖို့ Dolby ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူ Hybrik အပေါင်းအဖေါ်များ
Mountain View, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ Hybrik, Inc ကိုယနေ့က၎င်း၏ cloud-based transcoding ပလက်ဖောင်းသို့ Dolby Vision ၏™ encoding ကထောက်ခံပေါင်းစည်းရန်အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဒါဟာပူးပေါင်း Amazon ရဲ့ AWS မိုဃ်းတိမ်သည်ဗိသုကာ၏ elasticity ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, Dolby Vision ၏အကြောင်းအရာအရှိန်ပေးပို့များအတွက်လက်လှမ်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်နိုင်ပါတယ်။ Dolby Vision ၏အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ, သာ. ကြီးမြတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ဆနျ့ကငျြဘပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်မှာတီဗီအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲ ...
, Masstech တီထွင် Inc ကိုကမကြာသေးမီက archive ကိုတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုရောင်းချခဲ့သည်ဟုကြေညာလိုက်ပါတယ် - * ကုမ္ပဏီငါးခုသစ်ကိုဖောက်သည်အမ်စတာဒမ်, IBC, 12th စက်တင်ဘာလ 2017 (7.J15t ရပ်) မှအတော်ကြာ archive ကိုများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များရောင်းချနှင့်အတူအရှိန်အဟုန် generate ဆက်လက် အပါအဝင်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအသစ်ငါးခုဖောက်သည်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ: Arkansas ပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ်, တက္ကသိုလ် & ...
Masstech အရောင်းသစ် VP အဖြစ် Luc Tomasino ကိုကြေညာ
အမ်စတာဒမ်, IBC,7စက်တင်ဘာလ 2017 (7.J15t ရပ်) - Masstech တီထွင် Inc က, ယနေ့ Worldwide မှအရောင်းဒုသမ္မတ, ထိရောက်သောစက်တင်ဘာလ 11th အဖြစ် Luc Tomasino ၏ရက်ချိန်းကြေငြာလိုက်သည်။ Masstech ရဲ့ Markham, အွန်ရုံးအခြေစိုက်, Tomasino Masstech ရဲ့ဝင်ငွေ, အရောင်းကြီးထွားမှု, အမြတ်အစွန်းများနှင့်စျေးကွက်ထိုးဖောက်မှု / ရှယ်ယာကြီးကြပ်များအတွက်ခြုံငုံတာဝန်များကိုယူဆပါလိမ့်မယ်။ Tomasino ကသူ့မှစက်မှုလုပ်ငန်းအသိပညာနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစည်းစိမ်ကိုဆောင်တတ်၏ ...
Capella စနစ်များအလင်းမြန်နှုန်း watermarked transcoding များအတွက် NexGuard ပေါင်းစပ်ပြီး
NexGuard တစ် Kudelski ကုမ္ပဏီနှင့်မှုခင်းရေမှတ်နည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးနှင့် Capella စနစ်များ, စမတ်နှင့်ဆန်းသစ်ဖြစ်ကြောင်းမျိုးဆက်သစ်က enterprise level တစ်လောကလုံး transcoding ဆော့ဖျဝဲ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ယနေ့ Capella ရဲ့ Cambria FTC နှင့်အတူ NexGuard မှုခင်းရေမှတ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုထုတ်ပြန်ကြေညာ စံချိန်အချိန်အတွက်မဆိုဖိုင်ရဲ့ transcoding ကာကွယ်ပေးသည်။ အဆိုပါ NexGuard အသံနှင့်ဗီဒီယို ...
IBC2017 ကို Preview: (SGL အပါအဝင်) Masstech တီထွင် Inc က
IBC2017 မှာ (SGL အပါအဝင်) Masstech တီထွင် Inc က - 7.J15A ရပ်အသစ်-သည့်ဒင်္ Masstech တီထွင် Inc ကို, ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ Masstech နှင့် SGL ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမမှေး, ရပ်တည်ချက် 2017.J7A အတွက် IBC15 မှာယင်း၏ပြပွဲပွဲဦးထွက်စေမည် ။ အဆိုပါစုစည်းအဖွဲ့အစည်းတန်ဖိုးရှိသောမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဖြေရှင်းချက်၏စျေးကွက်၏အကြီးဆုံး provider ကဖြစ်လာမှတပ်ဖွဲ့များပါလိမ့်မယ်ချိတ်တွဲနေ ...